Any Sina dia fahafinaretan'ny vavahady ny bibikely. Vaovao momba ny dia
Any Shina dia mahafinaritra ny lanilaniny ny bibikely
Mariela Carril | | Toerana fitsangatsanganana, gastronomy, Fitsangatsanganana any Azia
Tiako ny mihinana saika na inona na inona. Saika tiako ny zava-drehetra ary tsy mankahala ny gastrandie eto amin'izao tontolo izao aho. Amin'ny teôria, satria mieritreritra aho fa tsy hahazo tsiro bibikely. Tsy haiko… Hainao? Misy bibikely amin'ny sakafo sinoaTsy izy rehetra, fa amin'ny gastr gastrikan'ny faritra sasany manokana.
Ny sinoa dia tsy dia tany am-boalohany amin'ny fihinanana bibikely, izany hoe tsy izy ireo ihany. Ho fanampin'izany, an'arivony taona maro ny olona no nihinana bibikely. Ho any Chine ve ianao? Ka avelao aho hiteny amin'ny tenako fa misy bibikely dia sakafo matsiro ho an'ny lanilany.
1 Bibikely fihinana
2 Sakafo sy bibikely sinoa
Raha ara-pitsaboana izany entomogafia no iantsoana azy. Ny karazan'olombelona dia nihinana bibikely nandritra ny an'arivony taona maro, atody, olitra ary bibikely olon-dehibe dia isaina amin'ny sakafontsika hatramin'ny andro taloha ary amin'ny kolontsaina maro dia mbola manana ny toko ao an-dakozia izy ireo.
Fantatry ny siansa izany karazam-bibikely an'arivony izay lanin'ny olombelona amin'ny 80% amin'ireo firenena eto amin'izao tontolo izao amin'ny kontinanta rehetra. Na dia any amin'ny kolontsaina sasany aza dia fahita izany, amin'ny hafa kosa dia fady na fady ary amin'ny hafa dia zavatra tsy voarara izany fa maharikoriko be.
Bibikely inona no fihinana? Lava ny lisitra fa misy karazan-lolo maro, ray ana-nofo, renitantely, fanenitra, kalalao, valala, samoina, tritika. Ny fihinanana bibikely dia misy tombony sy tsy fatiantoka misy, misy tombony amin'ny lafiny tontolo iainana sy ho an'ny fahasalamantsika ihany koa, fa ny zava-drehetra dia mitaky fitandremana sy fahadiovana.
Indraindray mety hisy hieritreritra fa ny fihinanana bibikely dia misy ifandraisany amin'ny fahantrana, saingy hevitra tsy misy fangejana izany. Andao hieritreritra fa firenena mahantra be i India nefa ny mponiny dia mpihinan-kena, tsy mihinana bibikely. Fantatrao ve fa ny firenena mihinana bibikely indrindra dia i Thailand? Eny, manana orinasa 50 tapitrisa dolara izay manodidina ny bibikely.
Sakafo sy bibikely sinoa
Firenena midadasika be i Shina ary mizara faritra ara-jeografika maro ary samy nanamboatra ny fomba fahandroany manokana ny tsirairay avy mifototra amin'ireo akora eo an-tanana. Na dia miankina betsaka amin'ny vary aza ny nahandro atsimo, ny varimbazaha avaratra dia mampiasa varimbazaha betsaka kokoa, mba hanomezana ohatra iray fotsiny.
Soa ihany, raha tsy maharikoriko na inona na inona ianao ary te hihinana bibikely any Shina ianao dia azonao atao any Beijing izany, ny renivohitra. Tsy ny fihinanana bibikely no avy any amin'ny faritra lavitra, very any an-tendrombohitra.
Toerana mety amin'izany Tsenan'i Wangfujing izay any amin'ny distrikan'i Dongcheng. Làlana feno fivarotana gastronomika sy varotra izy io, iray amin'ireo malaza indrindra eto an-tanàna.
Ny ampahany natokana ho an'ny lakozia dia ilay eo amin'ny làlam-be Wangfujing ary tena miavaka izy io. Mizara ho tsenan'ny alina sy ny araben'ny aperitifa izy io. Amin'ny roa tonta dia miharihary amin'ny mpanjifa ny sakafo ary samy malaza amin'ny sinoa sy mpizahatany avokoa.
Ny ankamaroan'ny sakafo dia andrahoina amin'ny paty, eo ambony afo, na nendasina na natsatsika ary amin'ny ankapobeny dia afaka misafidy ny fomba fandrahoana sakafo ianao. Misy akoho, legioma, holatra, faka lotus, tofu, hazan-dranomasina, ary tsy misy hatahorana… mandra-pahatonganao any amin'ny bibikely.
Ary eo, tsy misy rikoriko, dia hahita bibikely voatsindrona amin'ny paositry ny nify ianao. Bibikely sy bibikely bebe kokoa ary olona izay mameno ny vavany amin'izy ireo manararaotra ny otrikaina, ny proteinina ary ny mineraly. Tena sarotra ho antsika ny mihinana bibikely, mirona hamono azy ireo ny kolontsaintsika ka ...
Tsy haiko, mihinana maingoka, pupae aloandy, katsentsitra, centipedes nendasina ary hala Mety ho zava-mahadomelina amin'ny fiainana gastronomic anao io. Miankina aminao. Ireo izay nanandrana ireo zavatra ireo dia milaza fa tsy dia matsiro loatra, ny atidohanao ihany no milalao ny milaza aminao amin'ny fotoana rehetra fa mihinana bibikely ianao ... mamy na masiaka, fa na izany aza ny bitsika.
Saingy maro ny sinoa no tia an'io. Sady koa anie, kolontsaina tanteraka ny sakafo. Raha te-hitsidika ity tsena ity ianao dia afaka mahita azy eo amin'ny faran'ny avaratr'i Wangfujing.
Tsy any Beijing ihany no ahafahanao mihinana bibikely, any Kunming koa. Sina dia maherin'ny dimampolo foko ary na dia ny Han aza no maro an'isa dia misy maro hafa. Ny foko Jingpo, ohatra, dia malaza amin'ny fihinanana bibikely. Raha any Kunming ianao dia efa mihinana bibikely!
Eto izy ireo no mihinana valala voaendy, cicadas misy tongotra sy elatra tafiditra ao, olitra voanio ary bibikely mainty mitovy habe amin'ny ankihibe. Toeram-pisakafoanana voatondro hisitrika bibikely i Simao Yecai Guan. Ny menio dia manana izay nolazaiko rehetra ary mirehareha amin'ny fivarotana mihoatra ny 150 euro isan'andro amin'ny bibikely.
Kunming dia manakaiky kokoa an'i Thailand isan'andro amin'ny resaka gastronomy amin'ny bibikely, ary koa ny fananana trano fisakafoanana sy olona mihinana bibikely ao an-tranony. misy magazay manokana amin'ny karazany samihafa ary mivarotra azy ireo vaovao sy mangatsiaka.
Afaka mividy, ohatra, ianao Ny renirano Yunnan dia 23, 38 Euro ny kilao ary isan-taona ny tsena ho an'ity karazana ity dia mihetsika sahabo ho 320 XNUMX dolara. Tsy misy ratsy. Ary mitombo hatrany izy io. Misy fiompiana bibikely 200 eo ho eo ao amin'ny faritr'i Qinyuan, toeram-pambolena bibikely lehibe indrindra ao Shina. ary mamokatra 400 metric taonina isan-taona.
Ny zava-misy dia i Shina dia firenena izay tsy maintsy manome sakafo ny mponina izay ny fanisam-bahoaka natao farany tamin'ny taona 2010, dia tsy naneho na inona na inona ary tsy mihoatra ny 1300 tapitrisa ny mponina. Ary mitombo hatrany izy io. Ka raha afaka mamatsy kely ny fangatahana sakafo ny bibikely, dia tongasoa.
Lafin-javatra mahaliana iray hafa koa ny ny manam-pahaizana sasany dia milaza fa amin'izao fotoana izao ny firenena dia mbola tsy vonona ny handany bibikely betsaka, na dia tsara fanahy amin'ny tontolo iainana aza ilay indostria ary hanampy amin'ny krizy. Fa maninona Olana amin'ny fiarovana ny fahadiovana.
Mbola manana làlana hivoahana amin'ity raharaha ity i Sina, tsy maintsy mahatratra iray farafaharatsiny fenitra fiarovana ny sakafo alohan'ny fampiroboroboana ny bibikely ho sakafo. Tsy afaka manadino izany isika ny bibikely sasany dia misy poizina, residue pestiside, ary bakteria ary ny fomba fandrahoan-tsakafo indraindray dia tsy ampy hamongorana ireo loza ireo.
Mpahandro sinoa, tompon'andraikitra amin'ny fivarotana amina arabe sy trano fisakafoanana, tsy olona nahita fianarana momba ny fiarovana ara-tsakafo amin'ny ankapobeny. Mihevitra izy ireo fa raha maingoka sy olitra olitra no ampiasaina amin'ny fanafody sinoa nentim-paharazana dia tsy misy olana amin'ny fihinanana azy ireo. Raha masaka amin'ny maripana tsara izy ireo dia ampy izay.
Ny marina dia raha tsy misy mampatahotra anao ary te hihinana bibikely ianao dia toerana tsara i Sina satria eto dia sakafo matsiro ho an'ny lanilaniny. Mazotoa homana!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » gastronomy » Any Shina dia mahafinaritra ny lanilaniny ny bibikely
Maria Leyla Alvarez sary placeholder dia hoy izy:
CHINA MAMOAKA NY REPUDIO REHETRA SY NY FAHORIANA. AZO AZO ATAO IREO HATONDRANA AMIN'NY BIBIELA, AN'NY ANO SY NY LALANA INDRINDRA. INONA NO atao hoe kolontsaina? SA HITAN'NY filana ve? RAHA IZAO, AO COLOMBIA, MARATRA NY LALANA MBA HAMONOANA… REHEFA TOA IZANY EO, AZONAO AZO ATAO AMIN'NY TONY MBA HANOMPOANA ANAO!
Mankahala ny fanaonao izahay! CHINESE AVY AMIN'NY TANINDRAZANTSIKA! TSY FANTATRAN'izy ireo ny fikolokoloana ny teny, tsy ahena ny lanjany sy ny fahatokiany ny biby maro ...
INDRINDRA IZAY NAMINDRA NY CUSTOMANAREO IHANY!
Valiny tamin'i Maria Leyla Alvarez
CHINA NO TANINDRAZANA REHETRA NANARITRA NY FOMBA NY FANAHY AZY. REHEFA TIANAO IZAHAY RAHA MANDROSO AN-DALANA MBOLA HANOMPOANA AZY IANAO, FA AZA MITSANGARITRA INDRINDRA AMIN'IZANY FITIAVANA AZY. TSY FANTATRAO NY TENY FAHAMARINANA, HATSARANA ARY NY FAHENDRENA IZANY NO Hianarantsika avy amin'ireo biby maro.
HETSIKA NY FANATENANA NEGATIFA rehefa mitsidika firenena hafa ianao. Nanjary olom-banona tsy mankasitraka ho an'ny olona tia biby izy ireo .... Aza alaina sary an-tsaina ny tsy fahitana anao! GROSS!
Makina dia hoy izy:
Nilaza izy ireo fa handà an'i Shina NY fanontaniako, mihinana vato na faka ve ianao? Tsy tsapanao ve fa mihinana hen'omby, henan-kisoa, henan-kisoa, bitro, akoho, s, vorontsiloza, trondro, makamba, chalaines, foza, carakol, ry zareo dia biby daholo dia tsy azonao atao ny mandà an'izay olona tianao Handa ny Baiboly milaza fa ny kristiana dia mety hihinana zavatra mahafaty ary tsy hanimba azy izany satria hiaro azy Andriamanitra
Valiny tamin'i Makina
Adrian jose guevara dia hoy izy:
izay lazainao fa tsy misy anton'izany, izahay izay mihevi-tena ho "ara-dalàna" dia manao habibiana mahery vaika amin'ny zavamananaina maro izay ialanay, amin'ny fitrandrahana azy ireo amin'ny fomba diso ary tsy misy fanenenana. Heveriko fa ny fiarahamonina dia tsy maintsy mandroso sy manova fahazarana mahatonga ny fiainana hahafinaritra kokoa ho an'ny zava-manan'aina rehetra, ny bibikely dia heveriko ho safidy tsara hanovana ireo fahazarana ireo ary hitady safidy ara-pahasalamana mahasalama sy maharitra kokoa, tsy lazaina intsony ny vokany rehetra eto amin'ny planeta. resaka fandotoana, ny vono olona ateraky ny olombelona mba ho velona.
Avelako ho anao ity horonantsary ity izay hahitanao anao fa tsy ny Tandrefana no ohatra tsara indrindra amin'izany.
Valiny tamin'i Adrian Jose Guevara
Pablo Francisco Jimenez Gil dia hoy izy:
ITY TOERANA ITY IZAO. Mivoaka, mivoaka ny renim-pianakaviana CHINESE avy amin'ny firenentsika. ISIKA INDRINDRA ETO AMIN'NY FANOHANAN-JANAKA!
IZAY NO MAHATONAHANA NY TANINDRAZANA BE TANORA ETO AMIN'IZANY FIRENENA, SATRIA TSY VOAJAN'NY ANJAM-PANJAKANA SY saka ...
Valiny tamin'i Pablo Francisco Jimenez Gil
Marysol Mexico, DF dia hoy izy:
marina ny anao ... ezo de komer animalez ezta ratsy ... ary ez baztante kruel k ka ny toe-tsaina eztupida ananany dia loz zhinoz ... zon a porkeria zin ezkrupuloz antenaina fa nanao toy izany tamin'ny fianakavianao na sonz ny nataon'izy ireo i konz loz animalez x ke lo uniko ke lez ez ke tsy hita eo anelanelan'ny itz mizmoz ze tragen ... ary tena ez ny hany zavatra banga ..
Valiny tamin'i Marysol Mèxico, DF
Piticli dia hoy izy:
Ny ratsy fotsiny dia ny fomba fanoratanao, ry bitika, .. vakio ny boky fa tsy ny magazay nandehanan'i Justin Bieber, ...
Valiny tamin'i Piticli
olona dia hoy izy:
Ny ankoatry ny tsipelinao dia diso be (ary tsy milaza aho hoe tonga lafatra ny ahy), dia ny fitsikeranao ny sinoa, avy any amin'ny firenena izay mamono omby mahantra sy tsy manan-tsiny ho fialamboly.
"Marysol avy any Mexico"
Marysol avy any Mexico DF dia hoy izy:
Valiny tamin'i Marysol avy any Mexico DF
Izany dia noho izany, na noho ny fihetsiky ny takelaka tektonika, fa iza no mahalala, tsia.
Na eny, tsy maintsy heverintsika fa mitranga izany noho ny zavatra lazainao, izay misy dikany bebe kokoa
ajajjaj tsy mahalala inona, ianao koa mihinana, kisoa, omby, akoho sns, inona no resahinao. ary malahelo ve ianao? tsia !!!
antonini dia hoy izy:
Ho anao, Maria Leyla Alvarez, tsy ho masiaka be ny sinoa ary tsy fantatro izay, fa tsy azo lavina fa izahay Aziatika dia matanjaka noho ianareo Latino rehetra, na amin'ny faharanitan-tsaina ara-toekarena amin'ny zavatra rehetra, tsy misy akony amintsika izany rehetra. ny hevitrao ary avelao aho hanome anao torohevitra vitsivitsy ny olona malemy toa anao dia tsy hitombo na ara-toekarena na amin'ny ati-doha, malala, manao izany isika ... ary miloka aminao aho fa na ny pensilihazo, ny famafana, ny penina, ny kahie, ny zava-drehetra nampiasanao tamin'ny fotoananao tany an-tsekoly sy izay ampiasanao izao na ny solosainao aza dia vita amin'ny Sina, Taiwan na Japoney. Ataovy ampiasain'i Neny ny lohanao raha manana atidoha ianao na izay anananao dia ricotta tsy maninona. Ny zava-dehibe dia raha tsara kokoa isika, MIAINA NY OLON'NY CHINAAAAAAAAA Hiaina AAAAAAAA. aaaaaaa adinoko ALLELUYAAA HO ANAO RACISTASSSSSS. MISY FITIAVANA.
Mamaly an'i antonini
Marbella Garcia dia hoy izy:
Marina ny zavatra nolazainao. Butooo, maninona no mihinana fetus?
Valiny tamin'i Marbella García
ZelenA dia hoy izy:
ZAZA DAMN YELLOW NY BITCH LEHIBE KIEN LZ PARIO INDRINDRA MBOLA HIHAINANA IREO DAHOLO ARY NY FITIAVAN'ILAY VONDRONY MATY K ASKOOOOOOOOOOOO DAMN ANAO !!! ARY TSY tokony hihinana alika na saka saka ASCO ianao !!! BITCH PETS IREO !! MIHAINA ZAVATRA METY HATSARATRA !!
Mamaly an'i ZelenA
Fernando Martinez Martinez dia hoy izy:
Ny fantatro dia an'ity planeta ity aho. Mampijaly mafy ahy ny fanao atsinanana, toy ny fanaovana sorona sy fampijaliana biby hatao fihinana. Marina tanteraka Ramatoa Maria Leyla. Avy any Guadalajara aho ary fantatro fa avy amin'ny firenena rehetra manerantany amin'ny ankabeazany, mandà ireo fomba amam-panao ireo izahay. Na dia mandroso aza ny haitaon'izy ireo, amin'ny maha-olona azy ireo dia tsy mahomby tanteraka izy ireo.
Valiny tamin'i Fernando Martínez Martínez
Eny, mazava ho azy, satria azontsika antoka fa tsy mamono biby any amin'ny firenenao izy ireo, tsy misy ny fihazana, ny jono, na ny fiompiana omby na kisoa na vorona ary avy eo famonoana, amidiny am-pivarotana amin'ny fivarotana lehibe ary avy eo dia hanina avy amin'ny olona iray; Satria any amin'ny firenenao dia tsy misy na dia iray aza McDonalds ary raha misy dia tsy mihinana afa-tsy sakafo tsy mihinan-kena.
Ary satria i Guadalajara dia tsy ao amin'ny firenena izay mamono an'i Bulls amin'ny fialamboly sy fialamboly tsotra.
Marisol dimas dia hoy izy:
Valiny tamin'i Marisol Dimas
Namana, fa raha efa mihinana ny tenany dia tsy fantatrao ve fa mihinana "fetus" ny sinoa?
Hanombohana azy, lainga izany, tsy mihinana foetus ry zareo.
Faharoa, habibiana amin'ny biby, saingy fenitra roa heny, raha manevateva foko na firenena iray manontolo ianao satria vitsy ny mihinana alika sy saka, dia heveriko fa any amin'ny firenena onenananao dia mpihinan-kena daholo.
Eny, satria izao dia hita fa ny omby, ny akoho, ny kisoa ary ny trondro dia mendrika ny ho faty ary avy eo dia henaina, atonoina ary hohanin'ny olombelona; satria ny omby, ny akoho, ny kisoa ary ny trondro maty eran'izao tontolo izao mba ho sakafo dia tsy nanana zo hanana fiainana: / (SARCASM !!!)
Ka maninona ary, andao hitsikera ny Sinoa satria eto isika rehetra dia mpihinan-kena avokoa, satria any amin'ny firenentsika dia tsy misy mihinana hena ary manome lanja ny ain'ny biby rehetra isika; maninona i Arzantina no tsy mirehareha manana omby matavy indrindra; satria i Brezila dia tsy mandoro ny ala Amazon amin'ny fiompiana omby; satria tsy manao ceviche i Peroa ary raha manao izany dia hanao izany raha tsy mamono biby, na trondro aza; satria any Mexico dia tsy misy mpiady omby, ary satria any Amerika Latina rehetra dia tsy misy indostria mifandraika amin'ny hena.
Natacha dia hoy izy:
Heveriko fa mahafinaritra ny kolontsaina sinoa sy aziatika, marani-tsaina izy ireo ary manankarena amin'ny zavatra rehetra, tsy azonao atao ny manao tsinontsinona na iza na iza manana kolontsaina mahandro hafa, na mihinana biby isan-karazany, satria samy mamono omby ho an'ny akoho kisoa ny Tandrefana sy i Amerika atsimo. trondro, angamba ny vahoaka mahantra dia tsy manan-jo hiaina koa, avelao ny dible
Mamaly an'i Natacha
Fahavaratra 2016, inona no hatao any Norvezy
Tanàna inona no hitsidika an'i Etazonia